Funda ukuthi Ungathengisa Kanjani ngo-2021 kanye Nenzuzo kusuka ku-Daily Free Forex Signals 🥇
Izikhwama ze-Cryptocurrency ezihamba phambili
Ama-akhawunti we-CFD angama-78.77% alahlekelwa yimali
Idola lihlanganisa izinzuzo, ukunakwa kokushintshela ku-Euro
NgoLwesine, Septhemba 30, 2021
Njengoba iDollar igaya ukwenyuka okusekelwa yisivuno kuleli sonto, ukuthengisa ukunakekela kudlulele kwi-Euro, ikakhulukazi ezimakethe eziwela. Okwamanje, ukwanda kwemizwa yengozi kusiza izimali zezimpahla kanye ne-Sterling, ngedola lase-Australia elihola phambili. Ngomqondo ozinzile wobungozi, i-yen ne-Swiss franc imvamisa iba ntekenteke. Izinga lokungasebenzi e-Eurozone […]
I-AUDUSD Iyaqhubeka Ukuvuka Nombono Wezimakethe Ezimbi
Ukuhlaziywa Kwentengo ye-AUDUSD - Septhemba 30 Ngesikhathi sesikhathi saseMelika, i-AUDUSD ithole ukubambeka futhi yenyukela ku-0.7257, izinga elisha lansuku zonke elisekelwa ukwehla okubanzi kwedola laseMelika. I-DXY yehle ngamaphesenti angu-0.20, okukhomba ukuthi yehle okokuqala ngemuva kwezinsuku ezine zokuzuza. Ngaphandle kwezithelo ezizinzile ze-US bond ne-US engalingani […]
UMBUZO / i-USD
IDogecoin (DOGE) iguquka ngaphezulu kokuxhaswa okungu- $ 0.20, Ukwehla kuya ku- $ 0.16 Kungenzeka
Amaleveli Wokumelana Okubalulekile: $ 0.45, $ 0.46, $ 0.47Amaleveli Wokusekela Ayinhloko: $ 0.25, $ 0.20, $ 0.15 DOGE / USD Trend yesikhathi eside: Intengo yeBearishDogecoin (DOGE) yehlele ku- $ 0.20 ngemuva kokwephula okuphansi kwangaphambilini ngo- $ 0.21. $ 0.20 ukwesekwa. Ngaphambi kokuwa kwentengo yakamuva, intengo ye-DOGE yehle ngaphansi kosekelo lwe- $ 0.21, yaliphinda futhi ngaphambi kokuphinda iqale phansi. Njengamanje, […]
Imali Yedijithali Inenzuzo Yomnotho Womhlaba Wonke: Umbiko we-BIS
Umbiko omusha oshicilelwe yi-Bank of International Settlements (BIS) kanye neqembu lamabhange aphakathi kugomela ukuthi imali yedijithali ingakhuthaza izindawo zokuhlala ezisheshayo nokudluliswa kwemali okungabizi kakhulu. Cishe emasontweni amabili edlule, inhloko ye-Bank of International Settlements (BIS) Innovation Hub, uBenoît Cœuré, wagomela ukuthi amabhange amakhulu kumele athathe lelo gunya futhi […]
I-USDJPY Rally Iyaqhubeka njengoba Ithola Umfutho Othe Bullish
Ukuhlaziywa kwe-USDJPY - Intengo Iyaqhubeka Ngokuya phezulu uma i-Momentum Ikhuphuka i-rally ye-USDJPY iqhubeka njengoba umfutho we-bullish ukhuphuka. Abathengi bathole lesi sikhundla ngemuva kwekhandlela le-bullish eligubuzayo eduze kwezinga lokhiye elibalulekile le-109.100. Izinkunzi bese zikhuphula ingcindezi, futhi imakethe iyaqhubeka nokuhlangana phezulu. Intengo, nokho, isethelwe ukufinyelela […]
Imboni Yezimayini i-Bitcoin e-US Ingazuza Ku-Ban Banamuva Yase China: IMeya YaseFlorida
IMeya yaseMiami, eFlorida — uFrancis Suarez — ukholelwa ukuthi ukuqothulwa kweBitcoin (BTC) kanye ne-cryptocurrency nguhulumeni waseChina kuyithuba elibalulekile lokuthi imakethe yaseMelika isebenzise. Imeya, njengamanje esebenza ekwakheni idolobha lakhe libe yindawo ye-Bitcoin, utshele iBloomberg ukuthi: “Isimo senguquko manje. Idala okumangalisayo […]
I-CYCE - Ithokheni Yokuguqula Umdlalo Esiza Umthelela Womhlaba Wonke
Isisekelo sokuthinta nge-CYCE, ithokheni eliqhekezayo le-ERC-20 elizoguqula ngokuphelele indlela esicabanga ngayo nge-cryptocurrency. Kungumsebenzi wokuqala we-blockchain waseTurkey webhizinisi laseTurkey, kepha kunothi eliphezulu. Ngenhloso yokulwa nokuguquguquka kwesimo sezulu emhlabeni jikelele, i-CYCE ifuna ukuguqula ukuguqulwa kwamandla avuselelekayo kusuka […]
I-Uniswap (UNIUSD) Intengo: I-Bullish Movement Triggers ngeleveli engu- $ 17, ingaqhubeka iye ku- $ 30
Ukuhlaziywa Kwentengo Okungashintshaniswa - Septhemba 30 Intengo ingangena ezingeni lokumelana lika- $ 26 futhi ikhuphuke ibheke emazingeni okumelana ka- $ 30 no- $ 37. Ukwehluleka ukungena ezingeni lokumelana lama- $ 26 yizinkunzi kungaholela ekuguqukeni kwemakethe noma ukubuyela emuva kwe-bearish kumazinga okusekela ku- $ 21, $ 17 naku- $ 14. Imakethe ye-UNI / USD […]
Ukubuyekezwa Okuthuthukile Kwekhadi Lemali: Ungahlola Kanjani Umkhawulo We-AdvCash
I-Advanced Cash, efushaniswe ngokuthi i-AdvCash, iyinhlangano ebanzi yokukhokha eyaqala ukuba khona ngonyaka wezi-2014. IKhomishini Yezinsizakalo Zezimali ZaseBelize ivume le nkundla yokuthumela imali. Ngaphezu kwalokho, lolu hlelo lubuye luxhunyaniswe neWave Crest Holdings Limited, edume emphakathini wamakhadi we-Bitcoin debit. Le nkundla inikeza insizakalo ebalulekile yawo wonke umuntu ohlotshaniswa ne-virtual […]
I-USDCAD Ihlala Kumzila Oya Phezulu
NgoLwesithathu, Septemba 29, 2021
Ukuhlaziywa Kwentengo ye-USDCAD - Septhemba 29 I-USDCAD ihlala isendleleni ebheke phezulu njengoba iqhubeka nokushaya umugqa waphezulu. Le trajectory eya phezulu inike amandla imakethe ukuthi ihleleke ngokuhlelekile nangokuqhubekayo ngamazinga okumelana ehlangabezana nawo. Ngakho-ke imakethe ibonakala ikhombisa ukuphakama okuphezulu okungaguquki nokuphakama okuphakeme. Kodwa-ke, imakethe ivinjiwe […]
Ihhovisi 1/2373, Izinga G, iQuantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta 'Xbiex, XBX 1120, Malta
Inombolo Yenkampani Ebhalisiwe: 11746374
Thola izimpawu ze-VIPFaka idiphozi engu- $ 50 ukuthola Izimpawu Zamahhala ze-VIP Forex Zonyaka ongu-1! Ukuhweba ku-MT4 nge-Revenue kuze kufike ku-1: 500!